Ogaden News Agency (ONA) – Khilaaf Xoogan oo Sookala Dhexgalay Saraakiisha Ciidanka Itoobiya Iyo Baxsadka Ciidanka oo Siibadanaya.
Khilaaf Xoogan oo Sookala Dhexgalay Saraakiisha Ciidanka Itoobiya Iyo Baxsadka Ciidanka oo Siibadanaya.
Wararka naga soo gaadhaya Itoobiya ayaa sheegaya in khilaaf xoogani soo kala dhexgalay saraakiisha oogu saraysa Ciidanka Cirka Itoobiya. Khilaafkan ayaa salka kuhaya sida ay wararku sheegayaan maamul xumo, musuq, iyo tacadiyo aan lasoo koobi karin oo lagu hayo qawmiyadaha kale een Tigray ga ahayn taasoo ay kabiyo diideen qaar kamid ah ciidanka oo diidan ineey kaqayb qaataan dhibaatooyinka naxariis la’aanta ah ee lagu hayo shucuubta kudhaqan gobolodooda.
Waxay wararku intaas kudarayaan in oogu yaraan 30 duuliye (Pilot) oo kamid ah ciidanka cirka ay baxsadeen intii udhaxaysa 2014 ilaa 2015. Duuliyeyaashan baxsaday ayaa 10 kamid ah ay bilihii lasoo dhaafay oo kaliya wadanka kabaxsadeen. Labo kamid ah duuliyaasha baxsaday ayaa naloogu sheegay ineey kasoo jeedaan qawmiyada Tigrayga, kuwaasoo mid kamid ah darajadiisu ay tahay Kornayl.
Kadib markuu soo shaac baxay kala shakigan oo kuxididaystay ciidanka dhexdiisa ah ayaa Madaxa Ciidanka Cirka General Molla uu amar kusoorogay inaan wax hawlgal ah sida tababarka, tijaabooyin iyo hawlaha aan dagaalka ahayn oo idil laga mamnuucay ineey ciidanka cirku sameeyaan. General Molla ayaa aad oogu cago jugleeyay ciidanka. Arintan ayaa aad usii kala fogaysan khilaafkan udhexeeya ciidanka iyo saraakiisha Tigrayga ah.
Dhanka kale waxaa jeelka loo taxaabay askar badan oo kamid ah ciidanka cirka. Askartan laxidhxidhay ayaa badankood waxay kasoo jeedaan ururka OPDO ee Oromada oo katirsan isbahaysiga EPRDF. Waxaa looga shakiyay askartan jeelka loo taxaabay ineey sihoose oola shaqeeyaan ama gacansaar la leeyihiin Jabhada hubaysan ee The Oromo Liberation Front (OLF) oo weeraro aad uxoog badan kuhaya fadhiisimaha ay ciidanka gumaysiga Itoobiya kuleeyihiin gobolka Oromoda.
Guud ahaan saraakiisha Ciidanka Itoobiya ayaa tiradooda lagu qiyaasaa 57 Janan oo 53 kamid ah ay kasoo jeedaan qawmiyada Tigrayga ee tirade yar taasoo cadayn u ah sida ay wayaanuhu awooda wadanka gacanta oogu hayaan. Khubaro aqoon dheer uleh arimaha militariga guud ahaan gaar ahaan gaashaandhiga Itoobiya oon wax kawaydiinay xaalada ciidanka Itoobiya ayaa noosheegay in haday sidan kusii socoto khilaafkan sookala dhexgalay ciidanka iyo saraakiisha ay uhorseedi karto ineey ciidanku kacdoon sameeyaan halisna uu wadanku uyahay in dagaalo sokeeyo kaqarxaan.